Chọpụta UK na nlegharị anya | Akụkọ Njem
Mara United Kingdom na ebe ndị njem nlegharị anya ya
Susana Garcia | | General, United Kingdom
El United Kingdom nke Great Britain na Northern Ireland O nwere ókèala nke agwaetiti Great Britain, akụkụ ugwu nke agwaetiti Ireland na ụfọdụ agwaetiti ndị dị nso. Anyị ga-amatakwu banyere obodo a nke nwere ọtụtụ ebe mmasị, yana isi obodo.
Ọ bụrụ na-amasị gị United Kingdom n'ezie ị ga-achọ ịmara ọtụtụ obodo ya na steeti ya. E nwere ọtụtụ ebe ileta ime ka a ndepụta mgbe ọ na-abịa ịhụ UK.
1 Mara UK
2 Ihe ị ga-ahụ na England
3 Ihe ị ga-ahụ na Scotland
4 Ihe ịhụ na Wales
5 Ihe ị ga-ahụ na Northern Ireland
United Kingdom bụ otu ngalaba nke dị nke mba anọ mejupụtara: Scotland, England, Wales na Northern Ireland. Obodo a gbara oke osimiri Atlantic, Oke Osimiri Ugwu, Osimiri Bekee na Osimiri Irish, nke na-akpara ya oke. United Kingdom nwekwara ókèala mba ofesi iri na anọ na-enye anyị echiche banyere ihe alaeze Britain bụbu.
Agwaetiti a bụ bi ebe ọ bụ na njedebe nke oge prehistoric, n'àgwàetiti ndị Celt. Mgbe e mesịrị, mmeri Rom mere, na-aghọ ógbè nke alaeze ukwu ahụ ruo narị afọ anọ. Mgbe ọdịda nke alaeze ahụ wakporo Saxon, Angles na Jutes malitere. Ihe e ji mara okpukpe n'oge a bụ esemokwu okpukpe na Ndozigharị. Alaeze Ukwu Britain rutere n'ọ̀tụ̀tụ̀ ya kasị ukwuu na 1921 mgbe Agha Worldwa Mbụ bisịrị. Ugbua obodo a na-achịkwa ọchịchị ndị omeiwu nke onye isi ya a na-ahụ anya bụ Queen Elizabeth II, onye na-arụkwa ọrụ dị ka onye isi nke mba iri na ise ndị so na Commonwealth of Nations.
Ihe ị ga-ahụ na England
Mgbe ụfọdụ anyị na-emegharị United Kingdom na England, mana ha abụghị otu ihe ahụ, n'ihi na England bụ otu n'ime mba ya, na-enweghị obi abụọ a kacha mara amara. London bụ isi obodo Britain na obodo ya kachasị leta. Ọ bụrụ na anyị ga-amalite njem nke United Kingdom ọ kwesịrị ịdị na obodo a. Na London anyị na-ahụ nzuko omeiwu, Big Ben, Towerlọ Elu nke London, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ahịa ndị dị egwu dịka Camden ma ọ bụ Portobello.
Enwere obodo ndị ọzọ nwere ike ịmasị England olee otu ọ ga-esi bụrụ Manchester ya na nnukwu ulo ime obodo ya, katidral ma obu ulo akwukwo John Rylands. York bụ a mara mma ochie obodo na a akụkọ ihe mere eme center kwesịrị ịhụ. N'obodo Chester ị nwere ike ịchọpụta ụlọ ndị nwere ọkara, yana nnukwu katidral ya Norman ma ọ bụ nnukwu ọnụ ụlọ obodo neo-Gothic. Oxford na Cambridge bụ obodo abụọ dị na ndịda England na ebe ọmụmụ ihe. Canterbury bụ obodo mara mma nke mgbe ochie nwere nnukwu katidral Gothic, ebe ọ bụ oche nke ụka na England. Obodo ọzọ mara mma nke ịbụ obodo izu ike bụ Bath nwere ebe ịsa ahụ ndị Rom ma ọ bụ ụlọ ndị Goth.
Stonehenge obu isi okwu choro puru iche. Ihe ncheta a megalithic dị na ndịda England ma nwee ebe ọbịa ebe ị nwere ike ịzụta tiketi ma mụtakwuo banyere mmalite nke ihe ncheta a, nke doro anya na ọ malitere na 3.000 afọ tupu Kraịst.
Ihe ị ga-ahụ na Scotland
Scotland bụ obodo amaara maka ama ama ya mara mma. Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu ngwa ngwa maka ihe anyị ga-ahụ, anyị ga-elekwasị anya na edinburgh city, ya na ulo ya na Royal Mile. A na-atụ aro ya nke ukwuu ịbanye n'okporo ụzọ nke ụlọ Scotland, nke na-adị ole na ole, dịka Stirling, Dunnottar ma ọ bụ Eilean Donan. N'ihe gbasara ọdịdị ala, ị gaghị echefu Osimiri Nest na Castle Urquhart, mpaghara Highlands na Glen Coe Valley na N'ezie Isle nke Skye.
Ihe ịhụ na Wales
Cardiff bu isi obodo Wales na ya ị nwere ike ịga na veranda Victoria, Queen Street na High Street, okporo ụzọ etiti ya. Swansea bụ obodo nke abụọ kachasị ukwuu ma nwee National Waterfront Museum nke na-echeta oge gara aga nke ụlọ ọrụ obodo ahụ. O gosiputara ulo oku kachasi amara na South Wales, Mumbles Lighthouse. Wales nwere ihe karịrị narị ụlọ isii, ya mere, ọ bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị dị ukwuu, dịka ọ na-eme na Scotland. Ga ụfọdụ dịka Oglọgwara Ogmore bụ ihe achọrọ. Maka ndị hụrụ okike n'anya, ha nwere nnukwu oghere dị ka Snowdonia National Park ma ọ bụ Pembrokeshire Coast National Park.
Na Northern Ireland anyị na-ahụ Nnukwu ụzọ, nke e guzobere ọtụtụ nde afọ gara aga site na nkume mgbawa ugwu. Obodo Belfast na-eleta anyị n'ogige ụgbọ mmiri ebe e wuru Titanic a ma ama. Ihe ọzọ anyị nwere ike ime bụ ịgbaso ụzọ egwuregwu Game nke n'ocheeze, dị ka usoro isiokwu a bụ isi gbagburu na Northern Ireland ma nwee ọtụtụ ebe enwere ike ịga leta. O nwekwara ala mara mma, dịka nke agwaetiti Rathlin.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mara United Kingdom na ebe ndị njem nlegharị anya ya
Treviño, ala ụlọ ụka mara mma